အဖေတူ အမေကွဲ အစ်ကို မှ ညီမ ဖြစ်သူအား သားမယား အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့် - Real Gaming Myanmar
By zc /4months ago / Up to Date News / No Comments
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ကော. ခပုံ ကျေးရွာ အလည်ပိုင်း ရထားလမ်း အနီးနေ. ဒေါ်…. ၏ သမီး မ….. ( ၁၂ ) နှစ် အရွယ် ခလေးအား ဒေါ်….၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ဦး…. ယခင် အိမ်ထောင် မှ ပါလာသော သား မောင်ပိုင်စိုးသူ ( ခ ) အဘိုင် ၂၁ နှစ် မှ အလို မတူဘဲ သားမယား အဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုခဲ့ ကြောင့် အိမ်နီးချင်း များ၏ ပြောပြချက် များအရ သိရ၍ …
သမီး ဖြစ်သူ မ….. ( ၁၂ ) အား မေးမြန်း ရာ မ…. မှ အစ်ကို ဖြစ်သူ ပိုင်စိုးသူ မှ မိမိအား သာမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း ပြောသဖြင့် မိခင် ဖြစ်သူ ဒေါ်….. မှ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြသိင်္ဂီမော် အား ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သွားရောက် ပြောပြသဖြင့် …
၁၈ ရက်နေ. ၁၄:၀၀ ခန်.အချိန်တွင် ဒေါ်မြသိင်္ဂီမော် မှ နစ်နာသူ အား မုဒုံမြို.နယ် မြို.နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးသို. ကူညီ ခေါ်ဆောင် သွားပြီး မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အား အကျိုးကြောင်း ပြောပြရာ မြို.နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး မိုးလွင်ဦးမှ သက်ငယ် မုဒိန်းမှု ကျုးလွန်သူ ပိုင်စိုးသူအား အချိန်မှီ ဖမ်းစီး နိုင်ရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ.ဝင်များအား ညွန်ကြားခဲ့ပြီး ကျူးလွန် သူအား ၁၆:၀၀ ခန်.အချိန်တွင် ဖမ်းစီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ ရပါတယ် … ။
၎င်း ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မုဒုံမြို.နယ် မြို.မ ရဲစခန်းမှ သက်ငယ် မုဒိန်းမှု ကျုးလွန်သူ ပိုင်စိုးသူ အား ပ ( ၂၂၄၀ / ၂၀၁၉ ) ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သတင်း ရရှိပါတယ် … ။
အဖတေူ အမကှေဲ အဈကို မှ ညီမ ဖွဈသူအား သားမယား အကွိမျကွိမျ ပွုကငျြ့
မှနျပွညျနယျ မုဒုံမွို.နယျ ကော. ခပုံ ကြေးရှာ အလညျပိုငျး ရထားလမျး အနီးနေ. ဒျေါ…. ၏ သမီး မ….. ( ၁၂ ) နှဈ အရှယျ ခလေးအား ဒျေါ….၏ ခငျပှနျး ဖွဈသူ ဦး…. ယခငျ အိမျထောငျ မှ ပါလာသော သား မောငျပိုငျစိုးသူ ( ခ ) အဘိုငျ ၂၁ နှဈ မှ အလို မတူဘဲ သားမယား အဖွဈ အကွိမျကွိမျ ပွုခဲ့ ကွောငျ့ အိမျနီးခငျြး မြား၏ ပွောပွခကျြ မြားအရ သိရ၍ …
သမီး ဖွဈသူ မ….. ( ၁၂ ) အား မေးမွနျး ရာ မ…. မှ အဈကို ဖွဈသူ ပိုငျစိုးသူ မှ မိမိအား သာမယားအဖွဈ အကွိမျကွိမျ ပွုကငျြ့ ခဲ့ကွောငျး ပွောသဖွငျ့ မိခငျ ဖွဈသူ ဒျေါ….. မှ မှနျပွညျနယျ မုဒုံမွို.နယျ ပွညျနယျ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဒျေါမွသိင်ျဂီမျော အား ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ သှားရောကျ ပွောပွသဖွငျ့ …
၁၈ ရကျနေ. ၁၄:၀၀ ခနျ.အခြိနျတှငျ ဒျေါမွသိင်ျဂီမျော မှ နဈနာသူ အား မုဒုံမွို.နယျ မွို.နယျ ရဲတပျဖှဲ့ရုံးသို. ကူညီ ချေါဆောငျ သှားပွီး မွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး အား အကြိုးကွောငျး ပွောပွရာ မွို.နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး မိုးလှငျဦးမှ သကျငယျ မုဒိနျးမှု ကြုးလှနျသူ ပိုငျစိုးသူအား အခြိနျမှီ ဖမျးစီး နိုငျရေးအတှကျ ရဲတပျဖှဲ.ဝငျမြားအား ညှနျကွားခဲ့ပွီး ကြူးလှနျ သူအား ၁၆:၀၀ ခနျ.အခြိနျတှငျ ဖမျးစီး ရမိခဲ့ကွောငျး သိရှိခဲ့ ရပါတယျ … ။
၎င်းငျး ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ မုဒုံမွို.နယျ မွို.မ ရဲစခနျးမှ သကျငယျ မုဒိနျးမှု ကြုးလှနျသူ ပိုငျစိုးသူ အား ပ ( ၂၂၄၀ / ၂၀၁၉ ) ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၇၆ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူ ဆောငျရှကျထားကွောငျး သတငျး ရရှိပါတယျ … ။
Previous: ကား နဲ့ ချိတ် မိ ပြီး ခြေ တစ် ဘက် ပါ သွား တာ ကို မြန် မာ ဆို ပြီး ကား သ မား က ရော် ကြေးပြန် တောင်း နေ တယ်
Next: ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အဟော နှင့် ယတြာ